GBIME Archives - Chanakya Post
ग्लोबल आइएमई बैंकको २ नयाँ शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले रोल्पाको ताप्लाबजार र सिराहाको कल्याणपुरमा नयाँ शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । थप २ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संचालनमा आएसँगै बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा संख्या २२९ पुगेको छ । बैंकले रोल्पा जिल्लाको गंगादेव गाँउपालिका वडा नं. ७, ताप्लाबजारमा खोलिएको शाखारहित बैंकिङ सेवाको प्रतिनिधिको रुपमा कमला ओली र […]
ग्लोबल आइएमई बैंकका १० शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संचालनमा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले विभिन्न जिल्लाहरुमा थप १० वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिका वडा नं. २, अर्गल, नवलपुरको गैडाकोट नगरपालिका वडा नं. ३, ढोडेनी, बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका वडा नं. ५, कुवाकोट, बाग्लुङको जैमीनी नगरपालिका वडा नं. ८, अर्के छिस्तीमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । […]
ग्लोबल आइएमई बैंकको खुद नाफा ४१ प्रतिशतले वृद्धि, अरु सूचकमा कस्तो छ प्रगति
काठमाडौं । जनता बैंकसँग मर्जर प्रकृयामा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकले चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार सार्वजनिक विवरण अनुसार बैंकले अधिकांश सूचकहरुमा प्रगति गरेको छ। बैंकले ब्याज आम्दानी, खुद मुनाफा, निक्षेप संकलन, कर्जा परिचालन लगायतका सूचकमा बढोत्तरी गरेको छ भने निस्क्रिय कर्जा अनुपात घटाउन सफल भएको छ । […]
वाणिज्य बैंकहरुको वितरण योग्य नाफा साढे ४५ अर्ब, कुनको लाभांश क्षमता कति (सूची सहित)
काठमाडौं । हाल सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकहरु सबैले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक विवरण अनुसार अधिकांश बैंकहरुले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा व्यापारसँगै मुनाफा पनि बढाउन सफल भएका छन् । बैंकहरुले निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह, खुद नाफा, ब्याज आम्दानी, प्रतिसेयर आम्दानी लगायतका महत्वपूर्ण सूचकमा […]
निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेका बैंकलाई सरकारी बैंकको कडा टक्कर (तथ्यांक सहित)
काठमाडौं । सरकारी लगानीका बैंकले निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धन गरिएका बैंकहरुलाई अधिकांश सूचकमा पछि पारेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकहरुमध्य बुधबारसम्म १२ वटा वाणिज्य बैंकहरुले प्रकाशन गरेको आफ्नो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा यस्तो देखिएको हो । वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने बैंकहरुमा ग्लोबल आईएमई, माछापुच्छ्रे, सिटिजन्स, प्रभु, सानिमा, सिद्धार्थ, […]
बिग मर्जर: पहिलाे बैंक ग्लोबल आइएमई र जनता
काठमाडाैं । गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालकाे बिग मर्जरको सपना साकार पार्ने पहिलो बैकका रुपमा ग्लोबल आइएमई बैंक अगाडि सरेकाे छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले जनता बैंकलाई गाभ्नका लागि आजै प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेकाे हाे। दुई बैंकका अध्यक्षहरु चन्द्र प्रसाद ढकाल तथा केशव रायमाझीले आज एक कार्यक्रममा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । ‘दुई बैंकबीच […]
काठमाडाैं । कुनै पनि सरकारले नीति नियमको तर्जुमा गर्दा अध्ययन गरेर नै गर्छ । राजनीतिक निर्णयहरु सडक लगायत विभिन्न स्थानबाट हुने दवाबका आधारमा पनि हुनसक्छ । तर, आर्थिक निर्णयहरु त्यस्तो हुँदैंन । पर्याप्त अध्ययन भएकै हुन्छ । तर, अहिले एक्कासी मर्जर मार्फत वित्तिय सृद्धिढिकरणको अवस्था किन आयो ? २ बर्ष अगाडी पुँजी वृद्धि गर्दा […]
शिवजी र नन्दीबीच कहीँ वार्ता हुन्छ, हो यही बाटोमा छ सरकार र निजी क्षेत्र